Mihanaka dia mihanaka ny Covid-19: 356 ireo tranga vaovao, 3 no maty teto Analamanga | NewsMada
Mihanaka dia mihanaka ny Covid-19: 356 ireo tranga vaovao, 3 no maty teto Analamanga
Ankoatra ny any amin’ireo faritra 19 efa ahitana ny fiparitahan’ny Covid-19, ny eto Analamanga hatramin’izao no mitana ny lohalaharana amin’ny fihanahan’ity valanaretina ity. Olona telo no namoy ny ainy, raha ny tarehimarika omaly, ary 356 ireo tranga vaovao.
Mbola lohalaharana hatrany amin’ny isan’ireo namoy ny ainy sy ireo nifindran’ny valanaretina ny eto amin’ny faritra Analamanga. Telo indray ireo namoy ny ainy, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Avy etsy Befelatanana ny roa raha eny Anosiavaratra kosa ny iray, nodimandry. Fanindroany amin’izao ny nisian’ny matin’ny covid-19 teny amin’ity hopitaly eny Avaradrano ity. Anisan’izany ilay vehivavy namoy ny ainy teo am-piterahana ny zanany. Etsy an-daniny, avy etsy Befelatanana hatrany ny maro amin’ireo lavon’ity valanaretina ity ho an’ny faritra Analamanga. Telo ireo lavo tamin’io hopitaly io, afakomaly ary izao nisy roa nodimandry izao indray. Tafakatra 62 izany izao ireo lavon’ny coronavirus, hatreto.
Nitombo ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina
Etsy an-daniny, nitombo ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina ho an’ny Analamanga. Tafakatra 356 izany amin’ireo tranga vaovao miisa 395. Ahitana 23 any Atsimo Andrefana ary fito kosa any Fianarantsoa sy Lalangina any Matsiatra Ambony. Dimy ny etsy Arivonimamo, faritra Itasy ary iray avy ny any Boeny sy any Vavatenina, any Analanjirofo ary Atsinanana. Tsy fantatra kosa ny iray.
Tsiahivina anefa fa miisa 104 ny antontanisa amin’ireo tranga vaovao, afakomaly, avy eto Antananarivo avokoa ny 71 amin’izany.
Avy eto Analamanga ny maro amin’ireo « forme grave »
Tsy vitan’izany fa avy eto Analamanga ny maro amin’ireo marary mafy « forme grave » miisa 64 amin’ireo ahina mafy miisa 79. Etsy Befelatanana ny 41 raha eny amin’ny HJRA ny 15. Samy efatra avy kosa ny eny Anosiala sy Andohatapenaka. Roa ireo marary mafy any Toliary ary iray avy kosa ny any Bongolava sy Alaotra Mangoro.
Araka izany, mihanaka tanteraka ity valanaretina ity. Mbola foiben’ny coronavirus ny eto Analamanga nefa mirongatra any amin’ny faritra maro koa izany amin’izao fotoana izao.
Tafakatra 7 548 izany izao ireo nifindran’ny coronavirus eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Miisa 3195 ireo mbola ao anatin’ny fitsaboana sy fanaraha-maso tanteraka raha 4 286 ireo efa nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 79 ireo marary mafy ary 62 ireo namoy ny ainy noho ity valanaretina ity, hatramin’izao.